Shucaaca dhulka dushiisa | Saadaasha Shabakadda
Waxaa laga yaabaa inaan waligeen isweydiinay nooca shucaaca uu gaaro dhulka, marka laga hadlayo arintaan waxaa la ogyahay in soo gelinta aasaasiga ah ee shucaaca meeraha uu yahay shucaac ay sii dayso Qorraxda, gudaheeda taas oo geedi socod isdaba-joog ah oo hawojiin loogu beddelayo helium, taas oo soo deysa kuleyl aad u tiro badan. Kuleylkani wuxuu ka baxaa gudaha Qorraxda illaa dushiisa iyo dhulka.
Tamartaani waxaa lagu kala qaadaa dhulka iyadoo loo adeegsanayo mowjado elektromagnetic ah, oo leh dherer kala duwan. Dejinta dhererka dhererka kala duwan ee jirku sii daayo ayaa la yiraahdaa muuqaal jirkaas oo xiriir dhow la leh heerkulkiisa, si ah sida ay u sarreeyaan, uga gaagaaban dherarka dhaadheer ee ay soo saaraan.
Mawjadaha dhererka dhererka qorraxda ee ay soo dayso waxaa loo yaqaan qaybta qorraxda dhexdeedana, si macquul ah, dherer dherer aad u yar ayaa u badan, iyadoo u dhiganta heer kulkeeda oo aad u sarreeya, oo lagu qiimeeyo qiyaastii 6.000 K (5.727 ° C).
Qeybta qoraxda gudaheeda, seddex nooc oo shucaac aasaasi ah ayaa lagu kala saari karaa:
ku ah fallaaraha ultraviolet, oo leh dherer dherer ah inta udhaxeysa 0, 1 iyo 0,4 micrometer, iyo gaadiidkaas oo ay weheliyaan raajo iyo gamma rays 9% wadarta tamarta ay soo saarto Qorraxda.
b) Raajooyinka la arki karo ama iftiin leh, oo leh dherer dhaadheer - inta udhaxeysa 0,4 iyo 0,78 mikrometer - oo qaada qiyaastii 41% wadarta tamarta qoraxda.
c) The fallaaraha infrared, oo leh dherer dherer ahaan inta badan inta udhaxeysa 0,78 iyo 3 micron (kooxda u dhiganta infrared-ka u dhow), oo qaada 50% hartay tamarta qoraxda.
Dhammaan shucaacyadaasi waxay ka yimaadaan Qorraxda waxayna marka hore gaaraan xadka kore ee jawiga. Hadda qiimahan macnihiisu wuxuu qarinayaa qaybinta aad u sinnayn shucaaca u dhexeeya latitude-yada kala duwan, sinaan la'aanta ka jawaabeysa habka nidaamka-cimilada u dhexgalo shucaaca qoraxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Shucaaca dhulka dushiisa
Jawaab ku bixi Florencia Agu Llanes
Waad salaaman tahay Antonio, waad ku mahadsan tahay maqaalkan, waa mid aad u wanaagsan tan iyo markii ay tahay inaan sameeyo warbixin ku saabsan tamarta qorraxda maqaalkaaguna wuxuu soo koobayaa noocyada shucaaca ee ku jira shucaaca qoraxda. Waxaan kugu soo qaadanayaa warbixinta sida soo socota:
Castillo, AE (Maarso 2, 2014). Shucaaca dhulka dushiisa - Shabakada Saadaasha Hawada. Waxaa dib loo soo helay Oktoobar 21, 2014, laga bilaabo http://www.meteorologiaenred.com/la-radiacion-en-la-superficie-terrestre.html#
Ku jawaab liberona91